नेपालकी पहिलो रक गायिकादेखि सेनाकी मेजर डाक्टरसम्मको यात्रा access_timeचैत ४, २०७६
‘अजिब दास्तां हे ये कहाँ सुरु कहाँ खतम ये मञ्जिलें हे कौन सी न वो समझ सके ना हम’ आमा किशोरी सिंहले गाएका यस्तै हिन्दी गीतहरु सुनेर हुर्किएकी हुन् उनी । आमा को हुन् ? आमा मिहिनेत र सीपका खानी हुन् । आमा प्रेम र सौन्दर्यकी मुहान हुन् । आम...
‘कानको समस्यालाई सामान्यरुपमा नलिऔँ, ठूलै समस्या निम्तिन सक्छ’ access_timeफागुन २०, २०७६
आज मार्च ३ तारिख अर्थात् ‘विश्व श्रवण दिवस’ । यस दिन विश्वभरी सुस्त श्रवण अर्थात् बहिरोपनसम्बन्धि जागरुकता फैलाउन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिन्छ । यसपटक नेपाली जनतामाझ बहिरोपनसम्बन्धी जागरुकता फैलाउन नाक कान घाँटी (इएनटी) का १० महिला डाक्टरले सञ्चालन गर्दै आ...
रक नै जिन्दगी access_timeफागुन १२, २०७६
उनको जन्मथलो भारतको नयाँ दिल्ली हो तर कर्मथलो नेपाल बन्यो । धेरै नेपालीहरू उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा भारत भाँसिन्छन्, तर उनको चित्तको नरम पत्रमा नेपालले यसरी राज गरेको थियो कि उनले यसलाई आफूबाट अलग्याउनै सकेनन् । विषम परिस्थितिसँग पौँठेजोरी खेलेरै भए पनि नेपाली ...
गितारका 'जादुगर' access_timeमाघ २५, २०७६
‘कर्म गर फलको आशा नगर’ । हिन्दुग्रन्थ गीताको यो एक वाक्य निकै प्रचलित छ । उनले यही सिद्धान्तलाई पछ्याए, नजानिकनै । कर्मले कता डोहोर्‍याउला कुनै पत्तो थिएन । बस् त्यसमै डुबिरहे खुसीका साथ, निरन्तर । उनी ९, १० वर्षको हुँदा गितारप्रति जुन ‘भोक&...
रक एण्ड रोलमा ‘क्रान्ति’ ल्याउने ‘इन्जिनियर’ access_timeमाघ ११, २०७६
घरको कान्छो छोरो । १२ वर्षको उमेरमा आमा गुमाए । त्यससँगै गुम्यो सच्चा साथी, संरक्षक र सुख–दुःख बिसाउने काख । आमाको इहलिला समाप्त भएपनि चार दाजु र दिदीको संरक्षण र स्नेहमा हुर्किंदै गए । तर २२ वर्षको उमेरमा उनका ‘लाइफलाइन’ मध्येका एक अर्थात् उनका एक...
ब्यान्डको नियति : चर्चामा ‘फ्रन्टम्यान’, ओझेलमा अन्य access_timeमाघ ८, २०७६
हिट्स नेपाल प्रालिले शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा विभिन्न १६ वटा विधामा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका लोकप्रिय अनुहारहरुलाई पुरस्कृत गर्‍यो । हिरो २३औँ हिट्स एफएम म्युजिक अवार्डमा सविन राई एन्ड द फ्यारो ब्यान्डले तीन विधामा अवार्ड ...
‘एक दिन पनि टिकेन पदक जितेको खुसी’ access_timeपुस २, २०७६
भनिन्छ नि, बालबालिकाका लागि घर नै पहिलो विद्यालय हो । हो, उनको पहिलो विद्यालय अर्थात् उनको घरले नै उनलाई आज यो स्थान, प्रसिद्धि र सफलता हासिल गर्ने मार्गमा डोर्‍यायो । ललितपुरकी रैथाने । पारिवारिक पृष्ठभूमि थियो खेलकुदमय । घरमा थिए ६ दिदीबहिनी । तीमध्येकी...
उडुसले दुःख दिएर बनेको नेपालकै पहिलो रक गीत ‘दिउँला यो जोवन’ access_timeमंसिर २१, २०७६
यो वि.सं. २०२० साल तिरको कुरा हो । ५६ वर्ष अघिको । वरिष्ठ गायक कुमार बस्नेतलाई पाटन गाबाहालका सुन्दर श्रेष्ठले कलकत्ता जाऔं भने । त्यस ताका कुमार बस्नेत आफ्नो गीत ‘ओइ ना ना’ का लागि चर्चित भइसकेका थिए । रेडियो नेपालले उनको गीत दिनमै चार पाँच पटक बजाइद...
अ बर्न रकस्टार : मुक्ति शाक्य access_timeमंसिर १४, २०७६
भनिन्छ, रकस्टार जन्मन्छ । यदि कसैले जन्मजात नै रकस्टार हुने गुण ल्याएको छैन भने यसलाई लक्ष्य बनाएर अघि बढ्नुको कुनै तुक छैन । तर यदि कोही व्यक्ति यस्ता गुणबाट सुसज्जित छन् भने न आँधी न त कुनै हुरीले उसलाई रकस्टार हुनबाट रोक्न सक्छ । त्यसैले त भनिएको हो, ‘यु आर अ बर्...
कथा गीतकोः रबिन तामाङ र मुक्ति शाक्यबीच ‘हानथाप’ परेको ‘चौबन्दी चोलो’ access_timeमंसिर ६, २०७६
सन् १९९६ मा मुक्ति एण्ड रिभाइभल ब्यान्डको स्थापना गरेपछि फ्रन्टम्यान एवम् लिड गितारिस्ट मुक्ति शाक्यलाई नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा केही नयाँ गर्ने उत्कट चाहना बढ्यो । हुन त उनले दीप श्रेष्ठ, ओम विक्रम विष्ट, विकास श्रेष्ठलगायतका थुप्रै गायकलाई धेरैपटक सुने तर उनको चित्तको भित्री पत्र...
ह्या, यिनीहरु गाइने त हुन् नि... access_timeकात्तिक २३, २०७६
ब्यान्डका बाँसुरीवादक रुबिनकुमार श्रेष्ठसँगको कुराकानीपश्चात् बुधबार दिउँसो झम्सिखेलस्थित मोक्षमा साढे एक बजे भेट्ने निश्चित भयो । शनिबार आयोजना हुन लागेको १९७४ एडीको कन्सर्टमा ब्यान्डले पनि लगभग तीनवटा गीतमा ‘कोल्याबोरेशन’ गर्दै छ । त्यसैका लागि कुटुम्ब ब्यान्...
हायात होटल स्टाइलमा यसरी बनाउनुहोस् ग्रानोला लाल मोहन एप्पल चकलेट सेल access_timeकात्तिक ६, २०७६
दसैँ–तिहार साथीभाइको जमघट, रमाइलो अनि खानपिनको चाड हो । दसैँमा मासुका विभिन्न परिकार पाक्छन् भने तिहारमा मिठाइ, सेलरोटीलगायतका विभिन्न शाकाहारी भोजन तयार पारिन्छ । दसैँ तिहारमा टाढा रहेका आफन्तहरु पनि भेटघाट हुने भएकाले कतिले नयाँ खानेकुरा बनाएर खाने र...
दसैँमा यसरी देखिनुहोस् सुन्दर (भिडियो) access_timeअसोज २०, २०७६
हिन्दुहरूको महान चाड बडादशैं हाम्रो घर दैलोमा भित्रिसकेको छ । दसैँ भन्ने बित्तिकै पारिवारिक जमघट शीर्ष स्थानमा आउँछ । ठूलाबडा र मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाउने र आशीर्वाद थाप्ने हेतुले विदेशका र राजधानी केन्द्रित परिवारका सदस्य आफ्नो पुर्ख्यौली घर फर्कने र नाता क...
दसैँमा खाने होइन त ककटेल ? access_timeअसोज १७, २०७६
मधुशालाका पारखीका लागि ककटेल चिरपरिचित नाम हो । नेपालमा पार्टी कल्चर भित्रिएसँगै विभिन्न प्रकारका ककटेल, मकटेल भित्रिए । साथीभाइसँगको जमघट, भेटघाट, चाडबाडमा मानिसहरुले रमाइलो गर्ने उद्देश्यसहित ककटेल मकटेलको सेवन गर्ने गर्छन् । त्यसमाथि दसैँ, मेलमिलापको चाड हो ।...
उनले माया मार्नै सकेनन्... access_timeभदौ २८, २०७६
फिरोज स्याङ्देन – एउटा यस्तो नाम, जसलाई कुनै परिचयको खाँचो छैन । नेपाली सांगितीक क्षेत्रका एक अग्रणी व्यक्तित्व, एक चम्किला नक्षत्र । जसको नाम सुन्नासाथ मन मस्तिष्कले भनिहाल्छ, ‘परेलीमा लुकाइराख न’ । नेपाली गीत संगीतका पारखी सायदै कोही...
पर्दा पछाडिको हिरोदेखि फ्रन्टम्यानसम्म access_timeसाउन ३२, २०७६
उनी परिवर्तनमा विश्वास राख्छन् । एकै प्रकारका कुराहरु गरेर जीवनलाई मोनोटोनस (निरस) हुन दिँदैनन् । त्यसैले त २७ वर्षको सांगीतिक करियरमा रकका विभिन्न विधालाई आत्मसाथ गरेका छन् । ‘गितार गड’ को रुपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका उनको आफ्नै शैली छ । अरुभन्दा...
निर्भिक अभया ! access_timeसाउन २५, २०७६
भनिन्छ नि, नाम अनुसारको काम । भय नहुनाको भाव र स्थितिलाई अभय भनिन्छ । र, यही अभय शब्दबाट जन्मिएको हो उनको नाम, अभया । यिनी तिनै अभया हुन् जो मनमा लागेको कुरा भन्न कसैसँग हिच्किचाउँदिनन् । निर्भिक, निडर नारी । त्यसैले त विगत १६ वर्षदेखि ‘रकस्टार क्वीन’...
एउटा ‘विद्रोही’ रकस्टार access_timeसाउन ११, २०७६
उनी जन्मे हुर्केको चितवन । घर नजिकै पुलिस तालिम केन्द्र । त्यही तालिम केन्द्रमा पुलिसहरुले दिनदिनै परेड खलेको देख्दा उनको बालमस्तिष्कले भन्ने गर्दथ्यो ‘ठूलो भएपछि म पनि पुलिस बन्छु’ । पुलिसहरु दौडिरहँदा उनी भने पुलिसहरुलाई हेरेर ‘स्यालूट’ गरिर...
के थियो १९७४ एडीलाई एक गराउने त्यो ‘श्री’ संयोग ? access_timeसाउन ५, २०७६
कुरा सन् २००८ तिरको हो । त्यो दिन अरु दिनजस्तै सामान्य नै थियो । त्यही भएर ठ्याक्कै मिति पनि याद छैन । तर, त्यही एक दिनले नेपालकै सबैभन्दा लोकप्रिय सांगीतिक समूहको भविष्य निर्धारण गर्दै थियो । त्यो दिन १९७४ एडी ब्याण्डका ड्रमर एवम् पर्कसनिष्ट सञ्जय श्रेष्ठले ब्याण्डका ...